ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဆိုပါရှက်သည်ချိန်းတွေ့အကြောင်းသိကောင်းစရာများ, အဆင်မပြေသောပုဂ္ဂိုလ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 23 2021 |4မိဖတ်ပြီးသား
နေ့ရက်များလူတိုင်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုများဖြစ်နိုင်ပေမယ်အထူးသဖြင့်ဒါကြောင့်သင်တကယ်သိကျွမ်းဖို့ကိုချစ်လိုသော်လည်းသင်ရှက်တတ်ခြင်းနှင့်အဆင်မပြေနေသောတစ်ခုအံ့သြဖွယ်လူနှင့်အတူနေ့စွဲလုပ်နေတယ်ဆိုရင်. ဒါဟာမကြာခဏသတိမမူသောအရာဖြစ်သည်. လူတိုင်းသည်ကိုယ့်သင်ရဲရင့်ရနိုင်ဖြစ်သင့်တယ်လို့ယူဆသို့မဟုတ် "လူကိုတက်" သို့မဟုတ် "မိန်းမ" သို့ရာတွင်ရှက်နှင့်အဆင်မပြေသောသူသည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကြောင်းကိုလွယ်ကူစေမည်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေခံ၏နိုင်ပါတယ်.
ထိုသို့သောလူကိုသိမှရနိုင်မဖြစ်စဖူးအဖြစ်များစွာသောအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်, ပို. ပင်အစွန်းပေါ်အခြားလူတစ်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်ဖြစ်မည်ဟုထက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်အစစ်အမှန်သင်လွှတ်ခဲ့လျှင်သင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီတဲ့ connection တစ်ခုပေါ်မှာထုတ်ပျောက်ဆုံးနေ. ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကယ့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်သူတို့အားထုတ်ကြိုးပမ်းစေလိမ့်မည်ထိုအခါသင်နှင့်သူတို့အမှန်တကယ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းမည်ဖြစ်သောကြောင့်၏သင်တန်းကအားသာချက်တစ်ခုရှိပါတယ်. အားလုံးပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်ခြင်းတပြေးညီကမ္ဘာကြီးထဲမှာနေထိုင်ကြောင်းကို၎င်းအရှိန်အဟုန်ရိုးရှင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝအသက်တာ၌မဖြစ်ပေါ်ပါဘူး. ဒါဟာလွန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝတွေကိုသို့မတ်စောက်သောလေ့ရှိတယ်ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးကယ့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်ထိုသူတို့ကသင် woo မှကြာအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအရေးမကြီးပါဘူးမည်မဟုတ်.
ငါသည်အကြှနျုပျတို့သနေ့စွဲအပေါ်ကျော်လာဘယ်လောက်တိုးတက်လာဖို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ပါတ်သက်ပြီးဒီအပိုင်းအစ၌ဟောပြောသွားရမည်ဒါပေမယ့်ငါမမှားအောက်တွင်ဖြစ်ကြောင်းကို, ငါဖြစ်စေမည်သည့်အောက်တွင်အခြားမည်သူမဆိုမထားချင်ကြဘူး, ဒီအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရရန်လိုအပ်သည်တစ်နှေးကွေးနေမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်နှင့်ပြည့်စုံသောနေ့ချင်းညချင်းဆက်ဆက်ဖြစ်ရကြမည်မဟုတ်.
ဤ Oh-ဒါကြောင့်ပူအထီးနှင့်အတူနေ့စွဲသွားမည်သည့်ယောက်ျားသို့မဟုတ်မိန်းမအတွက်အကြံပြုပါရစေလိမ့်မည်ဟုသောအစွန်အဖျားဖြစ်ပါသည်! သို့သော်ထိုသို့ ပို. ပင်အရေးပါသင်ရှက်တတ်ကြသောအခါဖြစ်သည်, အဆင်မပြေသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး. အားလုံးပြီးတဲ့အခါငါတို့သည်ကြောင့်ကြားဖူးတယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို demure သည်နှင့်သင်စကားများကတဆင့်နေသောဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ရုန်းကန်ဆိုရင်ဝတ်စားဆင်ယင်ဘယ်လိုစကားလုံးတွေနဲ့ပြောမနိုင်ဘာလူအားဖြတ်ပြီးသွင်းထားရန်ကူညီပေးနိုင်သည်ဖြစ်စေဝတ်ဆင်သောအရာကိုတဆင့်နေသောဖော်ပြ. သငျသညျအတော်လေးတစ်ခုစားပြီးထုံးစံ၌ဝတ်စားဆင်ယင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာကသင်တစ်ဦးလေဒီဂါဂါပန်ကာဖြစ်ကြောင်းဘာမှပြောနေစရာမလိုဘဲသို့မဟုတ်သင်အတော်လေးအလိုအလျောက်နဲ့ပျော်စရာဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်. သင့်ကိုအစဉ်မိမိ၏စုံလင်သောမိန်းမသို့မဟုတ်ယောက်ျားဝတ်စားဆင်ယင်မယ်လို့ထင်ဘယ်လောက်သင်ကိုယ်တိုင်မြင်လမ်းဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်မဖို့သတိရပါ. ကထောင်ချောက်ထဲသို့ကျရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှိသည်. ငါမထိုသိုးတို့ကိုငါ့ကြိုက်ချင်တဲ့င့်ကြောင့်ဆိုသော်ငါသူတို့သည်ငါ့ကိုဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့လိုပါတယ်မည်သို့ခံစားရဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပေမယ့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုတို့သည်သင်ကျင့်သကဲ့သို့မကျင့်လျှင်တောင်မှသူတို့အဘို့အသင်ကို like နှိပ်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်း fancied ကြသူလူတို့ကုမ္ပဏီ၌ရှိနေစဉ် သင်နှင့်အထူးသဖြင့်ရှိသမျှသောသင်တို့၏ရာသက်ပန်ဆက်ဆံရေးဟာအဘို့ထိုသူတို့နှင့်အတူဝတ်ဆင်လိမ့်မည်စတိုင်အမျိုးအစားင်နောက်မှသင်သည်ဖြစ်နိုင်အသက်ရှည်ရှာလျှင်ထိုသူတို့အားမကြောင့်သင်တို့ကိုဝတ်ဆင်လိုအဘယ်အရာကိုမြင်စေခြင်းငှါ advisable လို.
ဖြစ်ရှက်နှင့်အဆင်မပြေ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်း overthinking သည်သင့်အခြေအနေကို overthinking ကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်တစ်တွေအများကြီးကိုကြား. ကမလွယ်ကူခဲ့လျှင်မူကားပြီးတော့လူ့လုပ်ဆောင်မည်. Overthinking ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက် embedded လာတာကိုဒါပေမယ့်ကျော်လွှားနိုင်သောအရာဖြစ်သည်. ကျွန်တော့်ကအားလုံးကိုတစ်ကြိမ်မှာပျောက်ကွယ်ကဲ့သို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်. ကလာသကဲ့သို့သင်တို့ကိုဖြည်းဖြည်းခြင်းနှင့်တစ်ဦးချိန်းတွေ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌ယူတစ်ခုချင်းစီဝါကျယူရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကြိုတင်မဲအတွက်သိပ်ရက်စွဲကိုစဉ်းစားရန်မကြိုးစားကြည့်ပါ. တေးဂီတပွဲများကဲ့သို့သောအခြားအမှုအရာနှင့်သင်၏စိတ်ကိုဖြည့်ပါ, စာဖတ်ခြင်း, TV show များ, ရုပ်ရှင်တွေ, အချိန်ပို. အဓိကသော့ချက်ကိုသင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ဘယ်လိုကထူးသင့်ကြောင်းအရာအားလုံးအားဖြင့်စဉ်းစားရန်အချိန်နှင့်သင်သည်အဘယ်သို့သင့်ဘူးခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင့်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကဲ့သို့များများစားစားရက်စွဲပေါ်တွင်ထွက်လာတယ်ဆိုတာဒါရုံလောက်ရက်စွဲကိုချွတ်သင့်စိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သည် မေးမြန်း.
သင်တို့သည်ဆယ်နှစ်များတွင်တစ်ခုခုခံစားရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကြောင်းစဉ်းစားနေတဲ့အခြေအနေများ၏အရေးကြီးပုံကိုတန်ဖိုးဖြတ်ဆန်းစစ်အလွန်ကောင်းသောလမ်းသည်. ကြိုးစားကြည့်ပါကဖြစ်သင့်အားထုတ်လုပ်နေပါတယ်ကဲ့သို့အရေးကြီးတဲ့ကြီးမားတဲ့ရှိမရှိစဉ်းစား. သင်အမှားလုပ်ဆိုရမည်, ဘာဖြစ်သလဲ? သင့်အိပ်မက်တွေကို၏လူကိုတွေ့ဆုံကြဦးမည်သည့်အခါကဆယ်စုနှစ်တစ်ခု၌သင်တို့ဟာအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လိမ့်မည်? လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနည်းငယ်အမှားများကိုလျစ်လျူရှုမနိုင်လျှင်သင်အမှန်တကယ်သူတို့နှင့်အတူဖြစ်လိုကြပါ? သူတို့သည်လည်းဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်သွားကြသည်ဆုံးနဲ့အလားအလာကြောင့်သူတပါးပိုင်အပေါ်စီးကြပြီးသင်တို့ဥစ္စာများကိုလျစ်လျူရှုပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ထားကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ဒါကြောင့်အနည်းငယ်အမှားများကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်ရတော့မှာမှတပါးအခြားသောဘုရား. သင်သည်အမြဲတစေသင်မှားခြင်းအရာတို့ကိုပေါ်တွင်သင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်သူတစ်ဦးနှင့်အတူရှိချင်ပါဘူး. နောက်အားလုံးအသက်တာ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဖြစ်လို?
ဒီနေ့ချင်းညချင်းဖြစ်ပေါ်လာမယ့်သည်. သင်သည်အပင်သင်သည်ထိုအရပ်၌ငါထိုင်နှင့်အနည်းငယ်သာပြောဘယ်မှာအချို့ချိန်းတွေ့ဘေးအန္တရာယ်ရှိစေခြင်းငှါ. သို့သော်ထိုသို့အားလုံးတိုးတက်မှုအကြောင်းဖြစ်ပါသည်. သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်လူမှုရေးအမှုအရာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရယူပါနှင့်အချိန်ကျော်ပြောဆိုခြင်း၌သင်တို့၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးတက်စေလိမ့်မည်. သင်ပြုသည့်အခါယေရှုသည်ယခုပင်တလျှောက်မှရောက် လာ. သူတို့အားရိုးကိုဖြိုဖျက်နှင့်သင်အနှံ့ လာ. ထိုကြောင့်သင်တို့မည်သို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတော့ဘူးနေပါတယ်မည်သို့သူသည်သင်၏အသက်တာ၌အခါဤအရာအလုံးစုံစိုးရိမ်ပူပန်မမူလျှင်လူသည်နှင့်လက်ျာနားထောင်ရန်ရှိလိမ့်မည် အခြားသူများကိုအလွယ်တကူနဲ့လုပ်ဆောင်ပုံရသည်လမ်းခရီး၌ connection ကအရေးမကြီးပါဘူးမည်မဟုတ်ကြောင်းအောင်မနိုင်. သင်တို့ရှိသမျှကိုငါကံ၏စိတ်ရင်းမှန်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်.